Chartering သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်များကဇိမ်ခံစဉ်းစားသည်. သို့သော်, မကြာခဏအလုံအလောက်အလွယ်တကူဇိမ်ခံ၏ကုန်ကျစရိတ်ထားတာတွေနိုငျသောတာဘိုပရော့ဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား၏အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါတယ်. အဓိကအကျိုးရှိအဆင်ပြေသည်, ပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်လာနှင့်၎င်း၏အဆင်ပြေ. အကြီးမားဆုံးအဆင်ပြေသင်ည TSA ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်အများပြည်သူလေဆိပ်ပေါ်မှာတကျွန်းသူနှင့်အတူသင့်ရဲ့တံတောင်ဆစ်ချိုးမတိုးမြှင့်ရှောငျနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒေါက်ဂလပ်အဒမ်အများပြည်သူလေဆိပ်အဖြစ်ကမ္ဘာက၌ကဲ့သို့အရုပ်ဆိုးဘာမှမရှိဘူးကြောင်းတစ်ချိန်ကပြောပါတယ်. သူကတစ်ဦးပွိုင့်ခဲ့. တစ်ဦးစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ကိုတစ်ဦးပိုပြီးသေးငယ်လေဆိပ်အပေါ်ပေါ်ကိုနိုင်ပါတယ်ကတည်းက, သငျသညျအကောက်ခွန်လိုင်းများကိုရှောင်ရှားနိုင်, ည TSA, အများပြည်သူပျံနှင့်အခြားကူညီပြီး.
တစ်ဦးတာဘိုပရော့ဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးခရီးသွားလာနေစဉ်သင်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြောင်း. လေထုတွင်, တစ်ဦးပိုပြီးသေးငယ်လေယာဉ်အတွက်, သင့်ရွေးချယ်မှု၏ထိုင်ခုံအတွက်, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Laptop ကိုသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်. သငျသညျဆင်းသက်ပြီးနောက်တင်ဆက်မှုလုပ်သွားနေတယ်ဆိုရင်, ဒါမှမဟုတ်တချို့စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်, သငျသညျခရီးစဉ်အတွင်းတင်ဆက်မှုသို့မဟုတ်အစည်းအဝေးပွငျဆငျနိုငျ. အများစုမှာလေယာဉ်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိ, ဖုန်းများ, ဖက်စ်များနှင့်ကလုနီးပါးဒုတိယအကြိမ်ရုံးစေအခြားအဆောက်အဦ.
သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ် chartering ၏အခြားအဓိကအကျိုးခံစားခွင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနဲ့လျှို့ဝှက်များမှာ. တစ်ဦးစင်းလုံးငှားလေယာဉ်တွင်, သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးသင့်ရဲ့ Laptop ကိုရဲ့မျက်နှာပြင်မှာသင့်ရဲ့ပခုံးကိုကျော်ရှာဖွေနေ ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလို. သင်လေယာဉ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်းလုံးငှားကြလျှင်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Co-ခရီးသည်ဖိတ်ခေါ်ဖို့လွတ်လပ်မှုမှာ. လေယာဉ်ကိုသင့်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ငှားရမ်းထားလျှင်, သင့်ရဲ့ Co-ခရီးသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်, သင်နှင့်အတူသွားလာရန်ကုမ္ပဏီအားဖြင့် deputed သောသူသည်ပေါ် မူတည်..
မြန်နှုန်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ် chartering ၏အခြားအဓိကအကျိုးရှိသည်. စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ဟာသေးငယ်တဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းလိုအပ်ကတည်းက, သူတို့ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုလေဆိပ်ပိုပြီးအများအပြားရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်. ဤသည်ကိုသင်လေဆိပ်ဖို့နဲ့မှသင်၏ခရီးသွားအချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်. ထိုအခါ, သင်လေဆိပ်မှာတခါ, သငျသညျလညျးအအကောက်ခွန်တန်းစီအပေါ်အချိန်ကိုကယ်တင်. ယေဘုယျအား, တာဘိုပရော့ဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား၏အကျိုးကျေးဇူးများ့ဇိမ်ခံထက်ကအများကြီးပိုစေကျနော်တို့ရှာတွေ့.
ရှငျဘုရငျသ Air လေကြောင်းလိုင်း 350
ရှငျဘုရငျသ Air လေကြောင်းလိုင်း 300
ရှငျဘုရငျသ Air လေကြောင်းလိုင်း 200
ရှငျဘုရငျသ Air လေကြောင်းလိုင်း 100
Pilatus PC ကို-12
ရှငျဘုရငျသ Air လေကြောင်းလိုင်း 90
Piper Cheyenne အဘိဓါန်